निकोल किडमैनको उचाई के हो?
ताराहरु इन्साइक्लोपैडियाको सितारे
निकोल किडमैन आस्ट्रेलियन मूल को हलीवुड अभिनेत्री हो। उनको असामान्य उत्तम उपस्थिति, उत्कृष्ट अभिनय प्रतिभा, जबरदस्त प्रदर्शनले उनको सबैभन्दा खोजीी अभिनेत्री मध्ये एक बनायो। फिल्ममा भूमिकाको अतिरिक्त, उनी अक्सर प्राय: विज्ञापन विज्ञापन अभियानहरूमा देखा पर्छन्, जसले निकोल किडमैनको मोडेल विकासद्वारा सुविधा दिन्छ।
जीवनी निकोल किडमैन
निकोल किडमैन 1967 मा होनोलुलु, हवाईमा जन्मेका थिए। उनको आमाबाबु अष्ट्रेलियनहरू जन्मिए र, जब केटी चार वर्षको हुँदा उनीहरूले आफ्नो गृहभूमिमा गए। त्यहाँ, सानो निकोल शास्त्रीय नृत्यहरूमा संलग्न हुन थाले र पनि बैले विद्यालयमा गए।
स्क्रीनमा पहिलो पटक निकोल किडमैन 15 वर्षको उमेरमा देखा पर्यो, कलाकार पट विल्सनको बोप केटी भिडियोमा अभिनेता। त्यस पछि, केटी अष्ट्रेलियन चलचित्रहरूमा धेरै भूमिकामा झन्डा लगाउन थाले। निर्देशकहरूले सूक्ष्म र नाजुक सुन्दरता, साथसाथै जवान निकोल प्रतिभा देखाए। र 1 99 8 मा, पर्दाहरू थरथरर "मृत शांत" रिलीज गरियो, जो अभिनेत्रीको पहिलो हॉलीवुड अनुभव थियो।
हलिवुडमा जान पछि, अभिनेत्री "थन्डर दिन" परियोजनामा ​​काम गर्दैछ, जसको बेला उनी आफ्नो भविष्यका पति टम क्रूजसँग भेट्छन्। उनकी विवाह 1 990मा भएको थियो, र विवाह9वर्ष लामो भयो। परिवारले एक छोरी र एक छोरा छोडेका थिए: इसाबेला जेन र कन्टोर एंथोनी।
निकोलको क्यारियरले स्टेनली क्बिक्रको फिल्ममा भूमिका पछि बन्द गर्यो "विस्तृत आँखाले बन्द गर्यो।" यसका लागि, यद्यपि अभिनेत्री एकसाथ धेरै परियोजनाहरूमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो, उनी टम क्रूजको पत्नीको रूपमा अझ बढी बुझिन्। त्यसपछि सफल परियोजनाहरू एकपछि अर्को एक पछि लागे: "पेमेमेकर", "मोलियन रूज!", "अरू"। अन्ततः, 2002 मा स्टीफन डल्डी द्वारा चलचित्र "घडी" को भूमिका को लागी, निकोल किडमैन ले अभिनय पेशे मा सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त गरे - एक ओस्कर मूर्ति।
निकोल किडमैनको व्यक्तिगत जीवनमा त्यहाँ धेरै उज्ज्वल उपन्यासहरू थिए। तथापि, उनले पारिवारिक खुशी पाए अष्ट्रेलिया गायक कैथ शहरी संग। तिनीहरूले 2005 मा भेटिए, र एक बर्षमा विवाह गरे र आधा सम्बन्धी एक अर्का। उनीहरूको परिवारमा दुई छोरीहरू थिए: स्यान्डे गुलाब र विश्वास मार्गरेट, उत्तीर्ण आमाको मदतको साथ।
निकोल किडमैनमा भएको आंकडाको उचाई र आकार के हो?
पर्दामा पनि यो उल्लेखनीय छ कि निकोल एकदम लामो र कमजोर व्यक्ति हो। निकोल किडमैनले उनीहरूको उचाई, वजन र मापदण्डहरू कहिल्यै देखाएनन, तर उनीहरूले उनलाई धेरै ध्यान दिएनन्। निकोल आफैंको अनुमानको अनुसार, उनको विकास अब 180 सेन्टीमिटर हुन्छ, किनभने त्यो 13 वर्षको उमेरमा 179सम्म बढ्यो र अहिलेको लागि केहि थप थपियो। एकै समयमा, उनी कहिल्यै बिचलित भएन किनभने उनको प्रिय उनको ऊँचा तल एक मानिस बन्छ। त्यसोभए, निकोल किडमैन र टम क्रूजको विकासमा भिन्नता लगभग 10 सेन्टिमिटर थियो: 170 सेमी बनाइयो 180 सेन्टीमिटर। यसको वर्तमान पति केईटी शहरको विकास क्रमशः 180 सेन्टिमिटर र 178 सेन्टीमिटर लामो हुन्छ।
अभिनेत्रीको वजन अलग-अलग समयमा 52 देखि 56 किग्रासम्म फरक छ, र यो आंकडामा निम्न प्यारामिटरहरू छन्: छाती -90 सेन्टिमिटर, कमर -58 सेन्टिमिटर, हिप्स -90 सेमी। निकोल किडमैन दोस्रो स्तन आकार। एकै समयमा, धेरै मान्छे भन्छन् कि निकोल को आंकडा धेरै रोचक अनुपात छ, त्यो एक किशोरी केटी हो जस्तो लाग्छ। यसले अभिनेत्रीलाई आफ्नो उमेर भन्दा धेरै सानो हेर्न अनुमति दिन्छ। र उनले सफलतापूर्वक आफ्नो शरीर को संभावनाहरु को उपयोग गर्दछ, खुले कंधों र ​​पछाडि संग तल मा औपचारिक पोशाक को संकीर्ण पोशाक को संकीर्ण पोशाक को पसंद गर्छन।
14 सेलिब्रिटीहरूको केशनीहरू पूर्णतया तिनीहरूको भाग्य परिवर्तन भयो
जेनिफर लोपेजसँग उनको प्रेमीफाई, आमा र बहनसँग समयसमय 100 गला समारोह
एक किमोनो र टोपीमा: केटी होम्स एक मितिमा गए
यो उचित मात्रा मा अभिनेत्री को पैर को नोटिंग को लायक छ। यो लगभग 39.5-40 को सामान्य साइजको शर्तमा छ। यस प्रशंसकहरु को बारे मा चैरिटी नीलामी को समयमा बाहिर जान सक्छ, जसमा अभिनेत्री उनको 40 आकार स्टोर्स र जूता को प्रेज आकार 39.5 बाट प्रदान गरे।
विकास र अन्य मापदण्डहरू मार्जोट रोबी
जोश हचेर्सनको विकास
रेनी जेल्लिभ्गर एक पटक फेरि बाहिरी परिवर्तनको कारणले मारे
विकास जस्टिन Bieber
माइकल जैक्सनको विकास
विकास र अन्य प्यारामिटर एलिजाबेथ ओल्सन
जेसन स्टेथम आफ्नो युवाहरु मा
विकास र सलमा हेकेको वजन
पावल वेस्ले को उचाई के हो?
ऊँचाई र वजन केन्डल जेनर
विकास गिलियन एन्डरसन
नताल्या वडोनावाको उचाइ र वजन
गर्भावस्थाको समयमा फ्रेक्सपिनिन
क्यामरून डियाज हार्मोन औषधि लिनबाट बरामद भयो
रयान रेनल्ड्सले नयाँ फिल्मको प्रस्तुतीकरणको साथ मास्को भ्रमण गर्नेछन्
कंधेमा स्कूलको थलो
खाने पछि उल्टी कसरी उत्प्रेरित गर्ने?
सानो कोठाको लागि बेड
पुरुषहरूको लागि फोलिक एसिड
जेन्सलाई के गर्ने? जेन्सको साथ फैशनेबल तस्वीरहरु प्रेमी, स्लिनिज र न केवल!
कति पतित अफिकेन्टोवा मरीना साँच्चै हो?
बच्चाहरु मा Streptococcal संक्रमण
अर्मेरिया - ल्यान्डिंग र हेरविचार
तलाक संग निराश: डार्क एलिसिया सिल्भरस्टोन पछि पछि खेल "ओस्कर 2018"
गर्भवती महिलाहरु को लागि सुचारु
सर्वश्रेष्ठ नयाँ वर्ष चलचित्रहरू
कसरी नजिकको जूताहरू लिनु हुन्छ?
महिलाहरु को फैशन - समर 2014
हाइपोथेमस को हार्मोन